Ra’iisal wasaaraha Ethoipia iyo wafdi uu hogaaminay oo gaaray magaalada Doha ee Dalka Qatar – Walaal24 Newss
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta safar ku tagay magaalada Doha ee caasimada dalka Qadar, waxa uuna dalkaasi kula kulmi doonaa Amiirka dalka Qadar iyo Masuuliyiin kale.
Garoonka Diyaaradaha magaalada Doha waxaa kusoo dhaweeyay Ra’isul Wasaare Abiy Axmed Wasiiro katirsan dowlada Qadar iyo Masuuliyiin kale, waxaana Abiy loo galbiyay qasriga Amiir Diwan.
Amiir Hir Sheekh Tamim bin Hamad Al-Thani iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abi Ahmed Ali, ayaa wadahadal rasmi ah ku yeeshay qasriga Amiir Diwan.
Kulanka labada dhinac ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sida loo horumarin lahaa horumarinta iyo dhinacyada kala duwan, gaar ahaan dhaqaalaha, maalgashiga, dalxiiska iyo kaabayaasha. Waxay sidoo kale isweydaarsadeen aragtida ku saabsan horumarinta gobolka iyo caalamka.
Kulanka waxaa goob joog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha H. Sheekh Cabdullaahi bin Nasser bin Khalifa Al Thani, iyo tiro ka mid ah Mudanayaasha ugu sarreeya wasiirrada.
Dhinaca Itoobiya, waxaa ka soo qayb galay dhowr wasiir iyo xubno ka tirsan wafdiga la socda.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa la siiyay munaasabad rasmi ah markii uu imaaday qasriga Amiri Diwan.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo u ambabaxay Dalka Qatar shir ka furmaya magaalada Doxa
Wasaaradda Waxbarashada XFS oo magacowday gudi Qaran ee Taclinta Sare oo KMG ah